Akwụkwọ 3 ị ga-agụ mgbe owu na-ama gị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
En owu ọmụma Ọ bụ otu esi agụ ya nke ọma ... Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dị m ka. Ọ dị ka oge m nwere udo ebe ihe niile gbara m gburugburu dị jụụ ma dịkwa jụụ. Agbanyeghị, ọ bụghị maka owu ọmụma ahụ ka anyị bịara ịgwa gị okwu taa, kama maka owu ọmụma nke na-anyịgbu, na-afụ ụfụ na nke a na-eche na mkpụrụ obi dị ka nnukwu ihe efu. Anyị niile, m ga-anwa anwa ịsị, anyị chere na owu ọmụma oge ụfọdụ ma dabere na onye ahụ, a na-ebu ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Gụ akwụkwọ bụ maka uto m, otu n’ime ụzọ kachasị mma iji were ya “gaba n’iru” ma ọ bụrụ na anyị agụkwa akwụkwọ ndị bara uru iji nagide owu ọmụma ahụ, karịa nke ka mma.
Oge a ka m chọrọ ịkpọtara gị Akwụkwọ 3 ị ga-agụ mgbe owu na-ama gị ma ọ bụ mgbe owu na-ama gị. Ha bụ ezigbo akwụkwọ kwesịrị ekwesị maka mgbe anyị nwere mmetụta efu dị mwute ma gbaa akaebe na ha 'na-azụ' mkpụrụ obi. Anyị nwere olile anya na ị masịrị ha!
1 "Siddhartha" nke Hermann Hesse
2 "Ike nke ugbu a" site n'aka Eckhart Tolle
3 "Gịnị ka anyị ga-ekwu maka mgbe anyị na-ekwu maka ịhụnanya" nke Raymond Carver kwuru
"Siddhartha" nke Hermann Hesse
Ruo taa, ọ ka bụ otu n'ime akwụkwọ kachasị amasị m. Oge mbụ m gụrụ ya bụ mgbe m dị afọ iri na ise kemgbe ahụ, agụgharịala m ya ugboro abụọ ọzọ. Ọ bụ otu n'ime ihe m ga-enwerịrị! Ebe m: 5/5.
Akwụkwọ akụkọ a, nke e setịpụrụ na ọdịnala India, na-akọ banyere ndụ Siddhartha, nwoke nke ụzọ nke eziokwu na-agafe n'ịhapụ ịjụ na nghọta nke ịdị n'otu nke na-adabere na ihe niile dị. Na ibe ya, onye edemede ahụ na-enye nhọrọ niile nke mmụọ nke mmadụ. Hermann Hesse batara n'ime mkpụrụ obi nke Ọwụwa Anyanwụ towa iji webata akụkụ ya dị mma na ọha mmadụ. Siddhartha bu oru nnochite anya nke usoro a ma nwee mmetuta di uku na omenala ndi Western na XNUMXth century.
"Ike nke ugbu a" site n'aka Eckhart Tolle
Na mbu, ozugbo m bidoro ịgụ ya, ọ bụ ịhụnanya-ịkpọasị ihe m chere maka akwụkwọ a. Enweghị m mmasị n'ihe ọ bụla, agbanyeghị, ihe gwara m na m ga-agụrụ ya maka na m ga-emesị nwee mmasị na ya. Nke ahụ bụ otú o si gaa! Ọ bụ akwụkwọ na-enye gị ọtụtụ jụụ, ọtụtụ udo na ọtụtụ echiche na ihe. Karịsịa, ọ na-akụziri gị ka ị nwee ekele maka ihe dị gị gburugburu ma ghara iwe iwe, iwe ma ọ bụ ichegbu onwe gị gbasara ihe ndị ị na-enweghị ike ịgbanwe. Ukwuu na-atụ aro. Ebe m: 4/5.
Iji banye n'akwụkwọ a magburu onwe ya, anyị ga-ahapụ uche anyị gbasara nyocha na ịgha ụgha ya, ego. Site na peeji mbu nke akwụkwọ a pụrụ iche, anyị na-ebili elu ka ukwuu ma na-eku ume ikuku. Anyị jikọtara ya na ebighi ebi nke ịdị adị anyị: "Otu dị ebe niile, ndụ ebighi ebi, nke karịrị anya nke ụdị ndụ dị n'okpuru ọmụmụ na ọnwụ." Ọ bụ ezie na njem ahụ siri ike, Eckhart Tolle na-eduzi anyị iji asụsụ dị mfe na usoro azịza ajụjụ dị mfe.
"Gịnị ka anyị ga-ekwu maka mgbe anyị na-ekwu maka ịhụnanya" nke Raymond Carver kwuru
Raymond Carver bụ onye edemede wetaara m oge ederede na nke ọma "oge niile". Regular n'ihi na e nwere ụfọdụ akwụkwọ ndị ọzọ nke ya nke m zụtara nke ukwuu na ọ na-ewute m nke ukwuu. Ọ bụ ihe banyere nke a: «Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya mgbe anyị na-ekwu maka ịhụnanya». Mana o mere ka m gbadata ọgụgụ nke mbụ ya, ọ bụghị nke abụọ ka m mere. Ọ maara nke ọma na ikekwe ọ bụghị oge kachasị mma ịgụ ya. Echere m na mgbe ọ bụla akwụkwọ na-amasị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị dabere na ọdee ya, otu esi dee ya, wdg, kamakwa oge anyị bi na ndụ. Ya mere, oge mbụ enweghị m mmasị na ya ma ọlị, nke abụọ, oge ejidere m nke ọma. Nke a bụ ihe mere m ji kwado ya, n'ihi na ha bụ akụkọ dị mkpirikpi nke na-akụziri anyị n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ iji soro ndị gbara anyị gburugburu nwee nkwukọrịta ka mma. Ebe m: 4/5.
Di na nwunye na-ada ada, ndị enyi na-eme njem na-achọ ihe, ụmụaka ndị na-anwa ịkọrọ ndị nne na nna ha, ihe adịghị mma, ime ihe ike, esemokwu, mgbe ụfọdụ ụwa na-achị ọchị ... kama kwuo ya. Na-enweghị ohere n'ebe ihe ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla, ọ na-anapụta ezigbo ya amorphous na obi ọjọọ dị mkpa. Akụkọ Carver dị ezigbo egwu nke na ọ na-ewe obere oge iji ghọta oke oke ọdịbendị na ụkpụrụ omume na-anọchi anya ya n'agbanyeghị atụmatụ dị obere. Mpịakọta nke abụọ nke akụkọ bụ ihe doro anya na ọ bụ ọrụ nna ukwu.
Kedu nke ị họọrọ, anyị nwere olile anya na anyị ziri ezi na akwụkwọ edemede a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ 3 ị ga-agụ mgbe owu na-ama gị